ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်သည် Gen Z ၏အဓိကယုံကြည်ချက်များကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်
၁၉၉၇ နဲ့ ၂၀၁၂ ကြားမှာမွေးဖွားလာတဲ့လူအများစုနဲ့အတူစားသုံးသူတွေဟာကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုပုံစံဟာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ Generation Z ၏လှုံ့ဆော်မှုသည်ထုတ်ကုန်ကောင်းများကိုဝယ်ယူရန်မျှသာမဟုတ်ပါ; အသင်း ၀ င်များသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်သူတို့၏ယုံကြည်မှုများနှင့်သူတို့ချစ်ခင်ရသည့်အကြောင်းရင်းများနှင့်မည်သို့ကိုက်ညီသည်ကိုအာရုံစိုက်သည်။
"မတူကွဲပြားခြင်း" နှင့် "ပါဝင်မှု" သည် Generation Zers အတွက်စကားလုံးများမဟုတ်ပါ။ သူတို့ဘ ၀ အစောပိုင်းကတည်းကတရားမျှတမှုနှင့်တန်းတူညီမျှမှုအတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုများသည်မီဒီယာနှင့်ညစာစားပွဲတွင်အငြင်းပွားမှုများကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ Gen Z ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်အာရုံကိုရယူရန်နှင့်ကမ္ဘာကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ဤမျိုးဆက်၏စိတ် ၀ င်စားမှုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကမည်သို့အခွင့်အရေးယူနိုင်သနည်း။
ဒီမှာ Hfrance.fr Coaches Council မှကျွမ်းကျင်သူ ၁၂ ယောက်ကကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကိုဘယ်လိုအားဖြည့်ပေးနိုင်တယ်၊ပြောင်းလဲမှု၏အေးဂျင့်အဖြစ်ဂုဏ်သတင်း။
> Generation Z. ၏ယုံကြည်မှုများ
အသင်းဝင်တစ် ဦး ချင်းစီမှပေးသောဓာတ်ပုံများ။
၁ ။ သင်၏ Gen Z segment ကိုသိပါ။
Gen Z ကိုအတွင်းမှာမင်းရဲ့ segment ကိုသိအောင်လုပ်ပါ။ သို့မှသာသင်ပစ်မှတ်ထားတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကသင်လိုချင်သောအမှတ်အသားတန်ဖိုးကိုဖန်တီးနိုင်မှာပါ။ အာရုံစူးစိုက်အုပ်စုများနှင့်အိမ်စာလုပ်ခြင်းကိုအပြီးသတ်မလုပ်မီသင့်နေရာတွင်မျက်စိကန်းသောအစက်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေလွဲမှားသောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူချက်များကိုနားလည်ရန်လုပ်ပါ။ နောက်ဆုံး Arthi Rabikrisson ,
2. နှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြန့်ကျက်မှုမဟာဗျူဟာကိုဖန်တီးပါ။ Gen Z သည်အလိုရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးပိုမိုပွင့်လင်းသောခေါင်းဆောင်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ စစ်မှန်ခြင်းဟူသည်နားထောင်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ဆိုလိုသည်လူတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရှေ့ကိုထွက်လာနိုင်မယ့်လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြင်နာစွာ၊ အလွန်အမင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနှင့်ဖန်တီးပေးခြင်း။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များသည်ဤကုန်ပစ္စည်းကိုစျေးကွက်တင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကဒီဖြစ်လာသည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည်ဤခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကိုနမူနာယူသောခေါင်းဆောင်များလိုအပ်သည်။ -
စစ်မှန်တဲ့ပါဝင်မှုဟာပြသခြင်းထက်မကပါ။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများသည် Maureen Orey , ၄။ ရှင်းလင်းသောအကျိုးဆက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်
သည်အဓိကစီးပွားရေးနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းနည်းပြများအတွက်ဖိတ်ကြားခြင်းအတွက်သာရပ်ရွာတစ်ခုဖြစ်သည်။
6. DEI ကိုသင့်နှလုံးသားထဲထည့်သွင်းပါကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ရန်
Gregg Brown ကိုနှုတ်ခမ်းဝန်ဆောင်မှုပေးသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊
ကုမ္ပဏီများသည်စကားလုံးများကိုမကျေနပ်နိုင်ပါ။ နှင့်မူဝါဒများ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲပြုမူရန်။ အကယ်၍ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကသင့်အား
Shelley Smith ဘယ်မှာဘယ်လောက်အလေးထားသလဲဟုမေးလျှင်၊
အကယ်၍ Gen Z ကို သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏ဆွဲဆောင်နိုင်မှုသည်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုတသမတ်တည်းဖြစ်စေရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အတွင်းပိုင်းယဉ်ကျေးမှုသည်သင်၏ပြင်ပစာတိုပေးပို့မှုနှင့်တူညီသည်။ ၎င်းတွင်သင်၏ရောင်းဝယ်မှုနှင့်စျေးကွက်တွင်တတ်နိုင်သမျှအားလုံးပါ ၀ င်ခြင်း၊ ပြီးတော့နံရံများအတွင်းတူညီသောသတင်းစကားကိုသင်သေချာစွာပေးပို့ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။သင့်ကုမ္ပဏီ၏။
10. စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းရင်းများကိုဝေမျှရန်
ဒီနေ့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများအတွက် Gen-Z အတွက်အမှတ်တံဆိပ်အယူခံဝင်မှုအတွက်တသမတ်တည်းရှိခြင်းသည်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ နှင့်အမှတ်တံဆိပ်အောက်ခြေလိုင်းထက်ပိုအရေးကြီးသောအကြောင်းမရှိရှိသည်။ သူတို့ကတစ် ဦး ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူအမြတ်အစွန်းရှာကြသည်။ အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်သစ္စာရှိမှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိစေရန်နှင့်ထိပ်တန်းအရည်အချင်းကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်မျှော်လင့်သောကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့ဂရုစိုက်ရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုဖော်ပြရန်ကြိုးစားကြလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းတရားများသည်ဒေသတွင်း၊ နိုင်ငံအဆင့်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာမှဖြစ်နိုင်ပြီးအဖွဲ့အစည်း၏မြင့်မားသောရည်မှန်းချက်ကိုပြသသင့်သည်။ - Ken Gosnell , 11. Ken Gosnell href=>
၁၁ ။ ဖောက်သည်များမဆုံးရှုံးရန်ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးသူတို့၏မမှန်ကန်သောရပ်တည်ချက် (သို့) ထင်မြင်ချက်များကိုလျော့နည်းစေသည်။ မင်းဒါကိုဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင်၊သင့်လုပ်ငန်း၏ရှုထောင့်တိုင်း (သင်၏တန်ဖိုး၊ လူများ၊ သင်၏ခေါင်းဆောင်မှု၊ သင်၏စျေးကွက်) သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးယင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်သင့်သည်။ -
၁၂ ။ သင့်ဇာတ်လမ်းကိုအထောက်အကူပြုပါစေ။
Generation Z (နှင့်စိတ်ဝင်စားသူအခြားသူများ) ကိုမတူညီတဲ့နည်းလမ်းများဖြင့်ကမ်းလှမ်းပါ။ သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့သမိုင်းကိုအထောက်အကူပြု၏။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏ကမ်းလှမ်းမှုများကိုသူတို့မည်သို့အားလုံးအသုံးပြုခဲ့ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဗွီဒီယိုများ၊ အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များကိုတင်ပြခွင့်ပြုပါ။ သင်၏ DCI အားထုတ်မှုကိုမည်သို့ချဲ့ထွင်ရမည်ဆိုသည့်အကြံပြုချက်များကိုလည်းသူတို့ကိုသင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဖြေရှင်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ -
2021-06-17 01:01:57 | ခေါင်းဆောင်မှု...
LinkShin ပေါ်ရှိ FacebookShare တွင်မျှဝေပါ“ SwiftStudent သည်အမှန်တကယ်ကူညီသည်။ "" ကျွန်မရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကကျွန်တော့်ကိုတက္ကသိုလ်ကနေဒေါ်လာ ၁၅၀၀၊ ကျူရှင်အတွက်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ရခဲ့တယ်။ SwiftStudent ကကျွန်တော့်ကို COVID-19 မှာကူညီခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းမှကျောင်း...
11“ ပေါင်းစပ်ထားသော” လုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရပ်ရွာကိုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းများ
2021-06-17 00:48:17 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin တွင် TwitterShare တွင်မျှဝေပါ ၀ န်ထမ်းအချို့သည်ရုံး၌ရှိနေစဉ်အချို့သည်အိမ်မှအလုပ်လုပ်ကြသောအခါ၎င်းသည်“ စပ်သော” လုပ်ငန်းခွင်ဝန်းကျင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းသည်ကုမ္ပဏီများစွာအတွက်လူကြိုက်များသည့်တည်ဆောက်ပုံဖြစ်လာသည်။ မည်သည့်ဖြန့်ဝေထားသောလုပ်သားအင်အားနည်းတူပင်ခက်ခဲသောအပိုင်းသ...
2021-06-17 00:25:13 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Linkedin Mathew Knowles၊ Dee C. Marshall နှင့် Latoya Shambo တို့ပေါ်တွင်တင်ပါ။ J. E. D. I. စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောမတူကွဲပြားမှုများသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှုများအားအတားအဆီးဖြစ်စေသောအခါတွင်ပါဝင်မှုနှင့်စနစ်တကျမညီမျှမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုဖြစ်စေခဲ့သည်။ တရားမျှတမှု၊ သာတူညီမ...
ဘုတ်အဖွဲ့သည်စီအီးအိုကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သလား။ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှင့်ရှင်သန်ရန်နည်းလမ်း ၁၃ ခု
2021-06-17 00:07:39 | ခေါင်းဆောင်မှု...
FacebookShare တွင်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin Trust တွင် ၀ င်ငွေရှိရပါမည်။ အထူးသဖြင့်စီအီးအိုနှင့်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့များအကြားအလွယ်တကူဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ စီပွားရေးလုပ်ငန်း၏မျက်နှာအဖြစ်စီအီးအို၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်သူ၏အောင်မြင်မှုကိုပျက်ပြားစေနိုင်သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များသည်စီအီးအို၏အပြု...
2021-06-16 05:10:09 | ခေါင်းဆောင်မှု...
TwitterShare တွင် FacebookShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်Shareပေါ်တွင်မျှဝေပါသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏စာပို့စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်းကိုမည်သူမျှမမြင်လိုပါ။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပြုလုပ်နေပုံရသည်။ သင်ဘာတွေမှားနေလဲ၊ သင်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ထွက်ခွာသွားမှုရပ်တန့်ပြီးနောက...
ပထမ ဦး ဆုံးစီးပွားဖြစ်ရောင်းချမှုတစ်လျှောက်လုံးတွင် ဦး နှောက်အာရုံကြောဖောက်သည်တစ် ဦး အားမည်သို့လေ့ကျင့်ရမည်နည်း
2021-06-16 05:06:48 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ပေါ်မှာမျှဝေပါ Twitter ပေါ်မှာမျှဝေပါ Linkedin တွင်မျှဝေပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုစတင်ခြင်းသည်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းနိုင်ပါသည်။ ခိုင်မာသောအယူအဆ၊ ရန်ပုံငွေနှင့်ခိုင်မာသောစီးပွားရေးအစီအစဉ်များရှိသည့်တိုင်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များသည်သူတို့၏အတွေးအခေါ်ကိုဆက်လက်ကျင့် သုံး၍ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိသေ...
2021-06-16 05:03:44 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ TwitterShare တွင် Linkedin တွင်မျှဝေပါမှတ်ပုံတင်ထားသောသူနာပြုများမှသည်ဆေးကျောင်းသားများအထိ၊ လူမည်းကျန်းမာရေးလုပ်သားအင်အားစုသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုလိုအပ်နေပါသည်။ Malcolm Meredith နှင့် Rebecca Hamilton တို့သည်အမေရိကန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏မျက်နှာသစ်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လူမည်းကျန်...
2021-06-16 04:44:46 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin တွင် TwitterShare တွင်မျှဝေပါသင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏စီအီးအိုဖြစ်သည့်အခါအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိအဖွဲ့တိုင်းကဆောင်ရွက်သောစီမံကိန်းနှင့်ပဏာမခြေလှမ်းတိုင်းကိုကောင်းစွာသိရှိနိုင်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ သို့သော်စီအီးအို၏ပါ ၀ င်မှုသည်အချိုးအစားမညီသောသက်ရောက်မှုများနှင့်ရလဒ်များကိုအရှိန်မြှင...
2021-06-16 01:29:29 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ပေါ်တွင်မျှဝေပါ Twitter ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin တွင်မျှဝေပါ UNICEF နှင့် LEGO ဖောင်ဒေးရှင်းမှထောက်ပံ့သောရပ်ရွာမိဘအုပ်ထိန်းမှုအစီအစဉ်သည်မိသားစုများကို COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအတွင်းရှင်သန်ရန်မည်သို့ကူညီခဲ့သည်ကိုကြည့်ပါ။ မောရှေသည် ၁ နှစ်သမီးအရွယ်ရှိသူ၏ဖခင် Ponsilio Phiri နှင့်အတူကစားသည်၊ အရှေ့...
2021-06-16 01:21:49 | ခေါင်းဆောင်မှု...
FacebookShare တွင်မျှဝေပါ TwitterShare တွင် Linkedin တွင်မျှဝေပါကျွန်ုပ်တို့တစ်နှစ်အနှောင့်အယှက်မှထွက်လာသည်နှင့်အမျှခေါင်းဆောင်များသည်သူတို့အဖွဲ့အစည်းအတွက်မှန်ကန်သောအလုပ်သို့ပြန်သွားရသောလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာနှင့်ပုံဖော်နေကြသည် မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်ပြန်လုပ်ရမည်ကို...
အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ကျွန်းသားများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတိုးတက်စေရေးကိုကူညီရန်နည်းလမ်း (၇) ခု
2021-06-14 14:41:29 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Twitter ၌မျှဝေပါ Linkedin တွင် Share on JohnSh T Saunders သည်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီတွင်ရုံး၌တည်ရှိသော Korn Ferry ၏မတူကွဲပြားခြင်း၏ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ getty လွန်ခဲ့သော ၁၈ လအတွင်း AAPI အသိုင်းအ ၀ ိုင်းသည် Covid-19 ရောဂါကူးစက်မှုအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုမမျှတစွာနှင့်မှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ...
2021-06-14 14:32:08 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook တွင်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင် ChicExecs PR & Retail Strategy မဟာဗျူဟာကုမ္ပဏီ၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်ဆင့်။ getty လိုချင်သော PR နှင့်မီဒီယာလွှမ်းခြုံမှုရလိုပါသလား။ ခိုင်မာသောအသံသို့မဟုတ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကိုရေးသားခြင်းသည်အစကောင်းသော်လည်းသင်၏...
2021-06-14 14:18:08 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Linkedin တွင် FacebookShare ကိုမျှဝေပါ Linkedin တွင် ShareShare တွင်ဝေမျှပါ။ ကမ္ဘာကျော်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ BTS ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှုဆောင်နည်းပြနှင့်သင်တန်းနည်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ လူးဝစ်အယ်လ်ဗာရက်ဇ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်မှုကိုစည်းကမ်းတစ်ခုအနေနှင့်စဉ်းစားလိုပြီး၎င်းအားဆင်ခြင်တုံတရ...
2021-06-14 14:16:33 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook တွင်မျှဝေပါ Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေပါ LinkedinNaimeesha Murthy - နည်းပညာတွင်မျှဝေပါ တည်ထောင်သူ | Getty ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်နှင့် Startup အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်စေသည်ဟုပြောရန်မှာအလွန်အမင်းလျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအများစု၏စီးပွားရေးများမှာပုံမှန်...
B2b ရှုခင်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင်အများပြည်သူနှင့်ဆက်နွယ်မှုသည်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှမည်သို့ပါ ၀ င်နေသည်
2021-06-14 14:09:18 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ပေါ်တွင်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ LinkedinFounder နှင့် B2B နည်းပညာနှင့်စားသုံးသူအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ဆက်သွယ်ရေးအေဂျင်စီ Red Fan Communication ၏ဥက္ကPresident္ဌ။ gettyB2B ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ဖောက်သည်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလုံခြုံရန်အပြင်...